By ၀င်းနိုင်သိန်း 30 May 2016
သရက်သီးဟာ ကျန်းမာရေး အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ သရက်သီးကို စားသုံးခြင်း ဖြင့် ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူ ပြုသလို သရက်သီးနဲ့လည်း ဟင်းပွဲပေါင်းများစွာကို ဖန်တီးတီထွင် နိုင်ပါတယ်။ အခုချိန်ကတော့ သရက်သီးမှည့်တွေ လှိုင်လှိုင်ပေါတဲ့ ရာသီ ရောက်လာ ပါပြီ။ အလုပ်ပိတ်တဲ့ နားရက်တွေမှာ မိသားစုတွေကို စိတ်ရွှင်လန်းစေ ချမ်းမြေ့စေဖို့ အတွက် သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ပြင်ဆင်ပေးလို့ ရနိုင်တဲ့ အလွယ်ကူဆုံး အချိုပွဲလေး တခု အကြောင်း တင်ဆက်ပေးပါရစေ။
အုန်းနို့နဲ့ ပြန်လည် ဖန်တီးထားတဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းကို သရက်သီးမှည့် ချိုချိုနဲ့ တွဲဖက်ပေးခြင်းဟာ တကယ့်ကို အံ့သြ ထူးခြားလှတဲ့ အရသာကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
ပါဝင်ပစ္စည်းက ရိုးရှင်းပြီး ပြုလုပ်ပုံကလည်း လွယ်ကူသက်သာ လွန်းတာမို့ သင့်မိသားစုနှင့် အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းတွေ အလယ်မှာ မျက်နှာပွင့်လန်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး အခွင့်အရေး တခုမို့ အခုပဲ လက်တွေ့ စမ်းသပ်ကြည့် လိုက်ပါ။
သရက်သီးပေါ်ချိန်မှာ စားချင်စဖွယ် အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ သရက်သီးမှည့် ချိုချို
ကောက်ညှင်းဆန်………….. နို့ဆီဘူး ၁ ခွက် ခွဲ
အုန်းနို့………………………. နို့ဆီဘူး ၁ ခွက် ခွဲ
သကြားဖြူ…………………. နို့ဆီဘူး ၁ ခွက်
ဆား………………………… လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း ခွဲ ခန့်
သရက်သီးမှည့်……………… ၃ လုံး
အုန်းနို့………………….. နို့ဆီဘူး ၁/၂ ခွက်
သကြား………………… စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဆား……………………. လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁/၄ဇွန်း
ပြောင်းမှုန့်………………. စားပွဲတင်ဇွန်း ၁/၂ ဇွန်း
နှမ်းမည်းလှော်…………. စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
ဦးစွာပထမ ကောက်ညှင်းဆန်ကို ရေဆေးပြီး ၁ နာရီခန့် ကြာအောင် ရေစိမ်ထားပေးပါ။ ပြည့်ဝစွာ ရေစိမ်ပြီးပြီ ဆိုတာနဲ့ ဇကာတခုထဲမှာ ရေစစ်ထားပါ။ သန့်စင်သော Non-Stick ဒယ်အိုးကို အသုံးပြုပြီး ကောက်ညှင်းဆန်နဲ့ ရေကို ထည့်ပြီး အပူပေးပါ။ မီးအရှိန် အနည်းဆုံးကို အသုံးပြုပြီး အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ရေခမ်းပြီး ကောက်ညှင်းဆန်တွေနူးအိပြီ ဆိုမှ အဖုံးဖွင့်ပြီး သကြား၊ အုန်းနို့နဲ့ ဆားကိုထည့်ပြီး သစ်သားယောင်းမလေးနဲ့ သမမျှတအောင် ဖြည်းညင်းစွာ မွှေပေးပါ။ အိုးအဖုံးကို ပြန်ပိတ်ပြီး မီးရှိန်အေးအေးမှာ နှပ်ထားပေးပါ။
ထိုစဉ်အချိန်အတွင်း အခြားအိုးတခုကို အသုံးပြုပြီး အုန်းနို့၊ သကြားနဲ့ ဆားတို့ကို ပျော်ဝင်သည်အထိ မွှေပေးပါ။ပြောင်းမှုန့်ကို ရေအနည်းငယ်နဲ့ ဖျော်ကာ အုန်းနို့ရည် ခပ်ပျစ်ပျစ် ရသွားစေရန် အနည်းငယ်ချင်း ဆီလောင်းထည့်ပြီး အဆက်မပြတ် မွှေပေးပြီး အအေးခံထားပါ။
အခွံခွာ ဓားကို အသုံးပြုပြီး သရက်သီးမှည့်ကို သေသပ်လှပစွာ အခွံခွာ ပါ။
မိမိတည်ခင်းလိုတဲ့ ပန်းကန်မှာ အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်းကို မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပုံစံခွက်လေးအသုံးပြုပြီး အလှဆင်နေရာချပါ။ သရက်သီးမှည့်ကိုလည်း မိမိနှစ်သက်တဲ့ ပုံစံလေးလှီးဖြတ်ကာ အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်းရဲ့ နံဘေးမှာ အလှဆင်ပါ။ အအေးခံထားတဲ့ အုန်းနို့ရည် ခပ်ပျစ်ပျစ်ကို သရက်သီးနဲ့ အုန်းနို့ကောက်ညှင်းပေါင်းပေါ် ဆမ်းပေးပြီး နှမ်းမည်းလှော်လေးတွေ ဖြူးထည့်ပေးပါ။ ပူဒီနံရွက် အညွှန့်လေးတွေနဲ့ အလှဆင်ပေးလိုက်ရင် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ရာသီစာ အချိုပွဲလေး တခုက သင်နဲ့ သင့်မိသားစု၊ အပေါင်းအသင်းတွေ အားလုံးကို စိတ်ကြည်နူး နှစ်သက်စေမှာ အမှန်ပါ။